ပန်ဒိုရာ: အသက်ရှူသံတွေ မူးဝေခြင်း
ရင်ဘတ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကျားကန်ထားတယ်
ငါ့ကို ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး သောက်ခိုင်းတယ်
အလွှာအထပ်ထပ် မျက်နှာဖုံး ကာ
Posted by pandora at 1:10 PM
အဲဒါ တုတ်ကွေးဖြစ်တာ နေမယ်။
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးပေးပြီး အဖျားတစ်နေ့နစ်ခါ တိုင်းခိုင်းထားတယ။်
(ကဗျာ ခက်ဆစ်) စကားပြေ
နံရိုးတွေကြားထဲက အဆုပ် တစုံမှာ ပါးစပ် မပါဘူး...
သို့မဟုတ်... အဆုပ်တွေမှာ ပါးစပ် မပါတာဖြစ်မယ်...
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေ အများကြီးသောက်ပြီး မူးနေပြီထင်တယ်။
ဂျင်းပြုတ်ရည် သောက်လည်း ကောင်းတယ်။
ကြုံတုန်း ဆေးမြီးတို ၀င်ပေးတာ။ :)
မြန်မြန် ကျန်းမာပါစေ ...
ကျနော့်မိတ်ဆွေ (အမှန်တကယ်စားသုံးသူ) ဆေးသမားတဦး၏ အဆိုအရ ဂျူးရောင်းအိစ်ထ် ဆေးခန်းမှ “ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်” သည် တကျွန်းလုံးတွင် ပစ္စည်းအမှန်ဆုံး ချောင်းဆိုးပျောက်ဆိုးရည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
နှစ်ခွက်သောက်စရာမလိုပါ။ ၂၀ မီလီမီတာ သောက်လျှင်ပင် လိုအပ်သော စည်းစိမ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။
Let me makeajoke.
2 cup of medicine ( to suppress coughing)may should be formulated by
Codeine( C18 H21 No3 H2O) and related Medicine from poppy juice.
Sedative-Hypnotic drug like librium, valium.
After taken You can အမြင့်တက်
Don't annoy me. It isajoke.
မခင်ဦးမေ ကိုအောင်သာငယ် မမေ ကိုပေါ ကျော်ညိုသွေး Bino မှတ်ချက်များ ကျေးဇူးပါဗျို့
နှစ်ခွက်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဇွန်းကလေးနဲ့ ၂ ဇွန်း..တနေ့ ၃ ကြိမ်တဲ့။ ကာရန်လေးထည့်ချင်လို့ နှစ်ခွက်လို့ သုံးလိုက်တာပါ။
ပါးပါးလေးပါ။ Don't be alarmed. :P
မနေ့ညက စားတာတွေကြောင့်လား မသိ...
ဒီနေ့ ပျောက်နေလို့... MC ယူပြီး နှပ်နေတာလား...
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး က ရီဝေ ဝေရီလေး...
ပိုးဖလံမျိုးတွေတော့ ပန် ရေ..
ကဗျာဆရာမ ဖျားလည်း ကဗျာကောင်းထွက်တယ်နော်...
ဘာဖြစ်ဖြစ်...ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ သိပ်မကောင်းဘူး ထင်တယ်။
သမီးပျို ကအသက်ရှုမ၀ပါဘူးဆိုမ ပန်ပန်ကလဲ နေကောင်းဘူးဆိုပဲ ထူးပါဝူးအေ အရက်သာ တောက်ပီးအိပ်လိုက်တော့ ဟီး
နှစ်ခွက်ထဲနဲ့ အမြင့်တက်နေတော့မယ် တဲ့ ဟဲဟဲ။ ကြိုက်သွားပြီ။